Tim Cook anokwira kuenda pachinzvimbo chechisere pakati pevatungamiriri vanokosheswa zvikuru | IPhone nhau
Apple CEO Tim Cook akazviwana aine keke rakaoma kugaya, yaive nguva yake kuti abudirire, kwete chete anonyanya kukosha CEO munhoroondo yaApple, asi mumwe wevanhu vane hunyanzvi pasi rose, uye kune avo vanonzi vazhinji ve hutsva hwakashandura nzira yatinoona tekinoroji. Nekudaro, izvo chokwadi makore akati wandei gare gare zvakatosiyana, tinozviona izvo Tim Cook anokwira kusvika pachinhanho chechisere pakati pevakuru vakuru vanokosheswa, uye kuti Apple iri mune imwe yenguva dzakanakisa munhoroondo yayo, kutaura zvemari. Tichaongorora iyi data.
Zvanga zva Glassdoor ndiani akapa chiyero ichi, chinoitwa mukati megore. Mune izvi, isu tinowana iwo gumi anofungidzirwa akanakisa maECO muAmerica. Gore rakapera Tim Cook akaita masiteki kekutanga, achiuya panhamba gumi. Gore rino, yakwira kusvika pachisere.
Bob Bechek - Bain & Kambani
Scott Scherr - Yekupedzisira Software
Dominic Barton - McKinsey & Kambani
Maka Zuckerberg - Facebook
Jeff Weiner - Yakabatanidzwa
Sundar Photosi - Google
Jim Whitehurst - Tsvuku Hat
Tevedza Google yeSundar Photosi inotsvedza, zvakadaro, pane zvimwe zvinogara zvakaita saMark Zuckerberg, uyo pasina mubvunzo asiriyeyeyeye chete CEO, asi mumwe wevanhu vane mukurumbira pasi rese. Zvinoenderana nehuwandu, Tim Cook ane mvumo ye96% yevashandi vake mukati megore rapfuuraNaizvozvo, isu hatisi isu tega takasiiwa nekuita kwekambani zvakajairika, asi nekugutsikana kwevashandi vayo, zvinoita sekunge Tim Cook mumiriri akanaka. Zvirinani zvinoita sekunge zvakadaro, asi isu hatimuzive iye pachezvake Nekudaro, matanho ake mukufarira nharaunda yeGBBT uye nharaunda zvakati taura zvakawanda nezvemunhu uyu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Tim Cook anokwira kusvika pachinhanho chechisere pakati pevakuru vakuru vanokosheswa
Sekureva kwaWozniak, Apple yakanyanya kugadzirwa iApp Store